Jackie Chan lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Jackie Chan lalao
Free-tserasera lalao Jackie Chan hamela anao milalao velona angano ny haiady. Mahira-tsaina izany, ary mitsiky mandrakariva mpiady tokoa handresy, deftly miatrika na dia miaraka amin'ny vahoaka ny fahavalony. Ananany rehetra ny Fahalavoana toa izany indrindra mampiditra fahavalo mamitaka, satria amin'ny toerana rehetra hainy na mahakivy na anjara fanafihana azy. Mitsimpona amin'ny ny fianjeran'i ny foto-kevitra, dia nanao azy ho fitaovam-piadiana goavana. Ny SAINA FANETRI-BEN'NY izy manao sy mampivelatra ny tenany, izay mahatonga azy ho tena Sensei. Niaraka tamin'ny toetra amin'ny virtoaly niainany, mampiasa ny malaza daka mba handresy izay olana.
Lalao Jackie Chan tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra Jackie Chan lalao
Mandoko-tserasera: Jackie Chan Adventures
Jackie Chan: miantehitra amin'ny drehetra mifandray
Mitadiava ilaina amin'ny Jackie Chan
Jackie Chan Kiss
Ity misy maimaim-poana Jackie Chan lalao an-tserasera, izay mbola sampy velively mampitolagaga ny fifehezana ny ady
Lalao Online Rehetra Jackie Chan lalao
Jackie Chan mpilalao sarimihetsika dia afaka soa aman-tsara mitondra ny anaram-boninahitra ny mpanjakan'ny kung-fu. Ny tetika dia tsy mahay manao izany, ka mampody azy ho fampisehoana. Mety ho atleta lehibe, fa izy no mainka mahaliana ny mamorona vaovao acrobatics amin'ny haiady. Tsy tena hoe hafahafa – Mitete ny tena dia voadio mijery ny milimetatra. Ny revolisiona eny amin'ny rivotra, ny tany sy ny avy amin'ny toerana dia afaka Arian'ny ny fahavalo, manao tohaina na hanomezako namely foto-kevitra fa afaka hihazona. Mazava ho azy fa nianatra tsara ary namerina, saingy toa ka voajanahary fa tsy misy olona manana hamerina ny fanambarana ny Jackie. Fa toy izany koa ireo fahaiza-manao tsikelikely nandritra ny taona maro. Indray mandeha koa izy mbola kely, vao nanomboka ny firongatry. Ary nanana ny andro voalohany ao an-dakilasy karate, tsara ny foto-kevitra fototra, sy ny fitsipika ary ny filozofia. Maro tamin'ireo ankizy rehefa lasa miaramila miavaka izay dia nirehareha noho ny mpampianatra sy ny ray aman-dreniny.
Ny manam-pahaizana ny Jackie Chan
Jackie Chan – no anarana izay no ahafantarantsika ny mpilalao, mpihira, screenwriter, stuntman, mpamokatra sy ny tale, mpilalao sy ny mpamokatra ny ady amin'ny SAINA FANETRI-BEN'NY toe-javatra. Fa nandritra ny fiainany imbetsaka niova anarana, ary ny reniny nanao azy Pao Pao, hevitra « cannonball ». Izany no anaran-dreniny naka ny zava-misy no dia teraka lehibe zazalahy – 5.5 kilao, na dia tsy azo hoe izao dia voalohany dia fototarazo manana ny mety ho tonga lehilahy mahery Izy.
Ao amin'ny tantara an-kira atao hoe sekoly Yuen Indro, hatramin'ny 1976 no atao hoe Cheng Loong Yuen raha ny Aostraliana namany tsy niova ny toetry izany ao amin'ny Jackie. Miasa amin'ny toeram-panorenana, dia zatra miteny amin'ny anaran'i Little Jack. Misy maromaro ny anarany amin'ny izay nisy azy dia nandritra ny fotoana kelikely:
Xing Lun (kely dragona),
Baseball Bat (mpilalao baseball manavy).
Jackie mandrakariva ny SAINA FANETRI-BEN'NY nanao ny tenany rehetra, na dia nampidi-doza izy ireo, ka matetika no tonga amin'ny ireo manokana. Ny Teny filamatra: « tsy mijanona-ins, tsy misy tahotra, tsy misy mitovy amiko koa ». Dia ampiasaina ho toy ny teny filamatra ho an'ny sarimihetsika & laquo, ho fikotroky ao amin'ny Bronx », fa amin'ny farany endrika kely. Mifidy andraikitra chan miasa amin'ny setrasetraina ny fitsipika: mba hilalao ihany ireo mahery fo izay nitodika tany izay eo ambany fitarihan'ny ny toe-javatra iray manokana; ny mahery fo dia tsy maintsy hamonjy ny olona, ​​hiaro – antitra, ny zaza, ny zazavavy; Jackie dia tokony ho azo antoka ny tenany, izay tsara, mampihomehy sy fidgety.
Ny mpilalao dia 60 taona (dia teraka tamin'ny 1954), fa mbola misy ohatra ho an'ny tanora maro. Ao amin'ny fahanterany dia tsy tao rava, sy ny toy izany koa rehetra jumps, somersaults, manidina sy ny miady, fahaizana mahagaga, dexterity joie de vivre ary. Jackie mbola miely soritry mamirapiratra ao amin'ny sinema, ary manasa anao izahay ho any Jackie Chan mba milalao ny lalao. Aoka ny solosaina vokatra tsy dia be toy ny zavakanto, fa isika kosa dia matoky fa tsy maharitra izany no toe-javatra. Mpilalao ankehitriny dia ho afaka hankasitraka ny fahaiza-manao ny mpiady malaza, mba handeha hiaraka aminy hiady maro fahavalo. Ny isany dia mahatsiravina, fa tsy Jackie. Izy nitsiky ary toa playfully niparitaka fahavalony, na dia piled an-tampon'ny azy ny vahoaka rehetra indray miaraka.
Ny tantara mahavariana ny lalao Jackie Chan
rehetra Jackie Chan natolotra ny lalao dia natao maimaim-poana ho an'ny mpitsidika tsy tapaka sy ny vahiny tsy nampoizina. Dia hahita ny famerenana ny tantara ny animation Jackie Chan andiany, dia ho hitanao talismans ka hiady amin'ny fahavalony rehetra, mampiasa maro loko SAINA FANETRI-BEN'NY kung-fu. Mahatsiaro ho toy ny angano velona, ​​satria sambatra toy izany mianjera lavitra taranaka rehetra.